दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २८ गते बिहीबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १४ - Sutra TV - Digital News Portal Sutra TV
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २८ गते बिहीबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १४
मेष : संकटको समयमा विशेष गरी आफ्नो धैर्य नगुमाउनुहोस्। कुनै मानिसहरू आफुले गर्न सक्ने भन्दा बढी प्रतिज्ञा गर्छन्, कुरा मात्रै गर्ने र कुनै परिणाम नदिने मानिसहरूलाई बिर्सिनुहोस्। प्रेम मामिलामा सशक्त नहुनुहोस्। तपाईंको कडा परिश्रमले आज काममा रंग देखाउनेछ। होसियारीसँग हिंड्नु पर्ने दिन, आज तपाईंको हृदयभन्दा मनको बढी आवश्यकता पर्नेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको दैनिक आवश्यकता पूरा नगर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईंको मुड बिग्रिनेछ।
वृष : यो एउटा अर्को धेरै ऊर्जा प्रदान गर्ने दिन हो र अनपेक्षित लाभ हुने सम्भावना छ। साँझमा चलचित्र, थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र राम्रो मुडमा राख्न सक्छ। रोमान्सको रोमाञ्चक दिन, साँझको लागि केहि विशेष योजना बनाउनुहोस् र त्यसलाई सकेसम्म रोमान्टिक बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले आज बनाएका नयाँ सम्पर्कले तपाईंको क्यारियरलाई नयाँ शक्ति दिनेछ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैनरु आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
मिथुन : कार्डमा शरीरको पीडा भोग्नु पर्ने सम्भावना उँचो छ। आफ्नो शरीरमा धेरै तनाव बनाउने कुनै पनि शारीरिक चेष्टाहरूबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस्। पर्याप्त आराम गर्न नबिर्सिनुहोस्। आज तपाईंको समर्पण र मेहनतले पहिचान पाउनेछ र तपाईंको लागि केहि आर्थिक इनाम ल्याउनेछ। तपाईं पार्टीको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना राम्रा मित्रहरूलाई निमन्त्रण गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईंको जयकार गर्ने धेरै मान्छे हुनेछन्। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ, र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। तपाईंको पुरानो साथी आउनेछ र आफ्नो जोडीसँग तपाईंले बिताएका पुराना सुन्दर सम्झनाहरुको सम्झना गराउन सक्छ।
कर्कट : आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आवश्यक परेमा मित्रहरूले तपाईंको सहायता गर्नेछन्। काम दबाब बढ्नाले मानसिक उथलपुथल र कोलाहल। दिनको उत्तरार्द्धमा आराम मिल्नेछ। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। आफ्नो जोडीले तपाईंको कुनै योजना वा परियोजनामा बाधा पुर्याउन सक्छस धैर्य नगुमाउनुहोस्।
सिंह : तपाईंले महसुस गर्ने तरीकामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। परिवारको वातावरण बिग्रिन्छ। तपाईंले आफ्नो हारबाट केही सिक्नुपर्छ, किनकि आज प्रस्ताव गर्नाले आफ्नो प्रिय झर्किन सक्छ। केही कुरा हुन्छ भनेर नपर्खिनुहोस्, बाहिर निस्केर नयाँ अवसर खोज्नुहोस्। आफ्नो साथीको आलस्यले आज धेरै कार्यहरुमा बाधा पर्न सक्छ।
कन्या : तपाईको लामो यात्रामा जाने योजना छ भने आफ्नो स्वास्थ्य र ऊर्जाको संरक्षण गर्ने बानीले तपाईंलाई अत्यन्तै लाभ हुनेछ। व्यस्त समय भए तापनि तपाईं सजिलै थकानको सामना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। बच्चाहरुले तपाईंलाई घरेलू काम पूरा गर्न मद्दत गर्नेछन्। तपाईंले आज प्रेमको मीठो चकलेटको स्वाद प्राप्त गर्नु हुनेछ। यो रचनात्मक प्रकृतिका परियोजनाहरुमा काम गर्ने र आफैलाई व्यक्त गर्ने पनि राम्रो समय हो। तपाईंको आफ्नो जोडीसित तनाउपूर्ण सम्बन्ध हुनेछ र अब हुनुपर्ने भन्दा लामो रहने गम्भीर असामंजस्यताहरू हुन सक्छन्।
तुला : आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आत्महीनतामा परेर सयम बर्बाद नगर्नुहोस्, तर जीवनको बारेमा जान्ने प्रयास गर्नुहोस्। भावनात्मक रोकावटले तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन्। विशेष ठाँउमा कार्यस्थलमा उत्पन्न हुन सकने विरोधको अगाडि बुद्धिमान र साहसी हुनुहोस्। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य गडबड भएकोले आज तपाईंको काममा केही समस्या हुन सक्छ।
वृश्चिक : राशिफल तपाईंसँग आज आफ्नो लागि पर्याप्त समय हुनेछ। त्यसैले, आफ्नो राम्रो स्वास्थ्यको लागि लामो पैदल यात्राका लागि बाहिर जानुहोस्। तपाईं आज आफ्नो पैसालाई लिएर समस्यामा पर्नुहुनेछ, तपाईंले बढी खर्च गर्नुहुन्छ वा आफ्नो वालेट गलत ठाउँमा राख्नु हुनेछ, बेवास्ताले गर्दा केही घाटा निश्चित छ। परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनको समाचारले तपाईंलाई मोहनी लाउन सक्छ। खुशीसँग एउटा पार्टीको आयोजना गरेर आनन्द मनाउनुहोस्। सेक्सको इच्छित परिणाम पाउनु हुनेछ। तपाईंको कामको पर्यावरण आज राम्रो कार्यमा परिवर्तन हुन सक्छ। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
धनु : बढी खानबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो वजनमा रोक लगाउनुहोस्। बच्चाहरू र परिवार आजका दिनको केन्द्र हुनेछन्। शारीरिक अस्तित्व अब तपाईंको लागि केही होइन, किनकि तपाईंलाई हरेक समय एक-अर्काका प्रेममा आफैलाई महसुस गर्नुहुनेछ। व्यवसायीको लागि राम्रो दिन। व्यापारको उद्देश्य लिएर अचानक गरिएको यात्राले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। आफ्नो जोडीसँग आज आफ्नो जीवनको सबैभन्दा रोमान्टिक दिन हुन गइरहेको छ।
मकर : आफ्नो बाध्यात्मक भावना र धडकनहरूमा रोक लगाउनुहोस्। आफ्ना रूढिवादी सोच र पुराना विचारहरूले तपाईंको प्रगतिमा बाधा ल्याउँछ, विकास गडबडाउँछ र अगाडि बढ्न बाधा दिन सक्छ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। अरूको मामिलामा तपाईंको संलग्नता आज रोक्नुपर्छ। तपाईंले आफ्नो विचार राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो र काममा आफ्नो सङ्कल्प र उत्साह देखाउनु भयो भने, तपाईंलाई फाइदा हुने सम्भावना छ। तपाईंको वैवाहिक जीवनको कठिन चरण पछि यस दिन निवृत्ति प्रदान गर्नेछ।
कुम्भ : तपाईंको धेरै भरोसा र सजिलो काम गर्ने समयले तपाईंलाई आज आराम गर्नको लागि पर्याप्त समय दिएको छ। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। तपाईं प्रेम प्रस्ताव राखेर धेरै खुशी हुनुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको भारी हलुँगो पार्नेछ। काम गर्ने आफ्नो वरिष्ठ आज स्वर्गदूतहरूको अभिनय गरेको जस्तो देखिन्छ। आज आफ्नो जोडीसित तपाईंले आत्मीय कुराकानी गर्नु हुनेछ।
मीन : तपाईंको मुस्कान निराशा विरुद्धको समस्या रोक्ने झैं काम गर्नेछ। अनपेक्षित अतिथिले साँझ तपाईंको घरमा भीड लगाउनेछन्। प्रेम इन्द्रियहरूले पाउन सक्ने कुरा होइन, तर तपाईंका इन्द्रियहरूलाई आज प्रेमका परमानन्दको अनुभव हुनेछ। स्थापित र भविष्यको रुझानमा तपाईंलाई केही दिन सक्ने मान्छेसँग आबद्ध हुनुहोस्। आफ्नो साथी उत्कृष्ट हुँदा जीवन साँच्चै नै सम्मोहित हुन्छस तपाईंले आज यसको अनुभव गर्नु हुनेछ।